Nepalistudio » नराम्रो सपना देख्नु भयो ? यस्तो हुन सक्छ कारण नराम्रो सपना देख्नु भयो ? यस्तो हुन सक्छ कारण – Nepalistudio
नराम्रो सपना देख्नु भयो ? यस्तो हुन सक्छ कारण
र मानिसले खराब सपना सम्झन्छ । यसका साथै मिर्गौलामा संक्रमण, रुघाखोकीजस्ता संक्रमण भएका मानिसले पनि नराम्रा सपना देख्ने अनुसन्धानकर्ताको भनाई छ । यस्तै, अति खराब सपना देख्नु पार्किन्सन रोगको प्रारम्भिक संकेत भएको न्युरोलोजिष्ट डा. रोबर्ट ब्रेनरको भनाई छ । माइग्रेनले पनि नराम्रा सपना देखाउछ । धेरैजसो महिलाले रजस्वला वरपरको समयमा अनेक थरि सपना देख्नछन् । स्वास्थ्य खबर बाट ।